Fanatsorana amin'ny vinavina statistika tsotra (tsanganana 473) - Raby Michael Avraham
Fanatsorana amin'ny vinavina statistika tsotra (tsanganana 473)
16 hevitra	/ 07 Iyar 05 - 2022/XNUMX/XNUMX 07 / 05 / 2022
Maka fotoana be loatra?
Misokatra amin'ny takelaka vaovao
Download [321.87 Kio]
Download [53.66 Kio]
→ Lahatsoratra teo aloha
Lahatsoratra manaraka ←
Hevitra 16 momba ny "Fanatsorana amin'ny vinavinan'ny statistika tsotra (Tsanganana 473)"
Z. Bayer 07 - 05/2022/23 amin'ny 14:XNUMX
Z. Bayer 08 - 05/2022/13 amin'ny 07:XNUMX
Ao amin'ny tontolon'ny tohan-kevitr'i Bibi, ny tohan-kevitra dia mihevitra fa iray ny ambony indrindra, rehefa tena azo atao (ary azo inoana mihitsy aza) fa misy mahafatifaty maromaro, ary noho izany farafahakeliny iray farafahakeliny. Amin'ny lafiny pratika dia tsy dia misy dikany loatra ny tohan-kevitra, izay lazain'ny tohan-kevitra dia ny hoe misy taham-bola tsara indrindra (raha ny vola miditra amin'ny fanjakana), tohan-kevitra somary tsinontsinona. Ny fanontaniana manan-danja dia ny hoe inona io isan-jato tsara indrindra io, izay mety miovaova amin'ny toe-karena iray mankany amin'ny iray hafa ary amin'ny toe-javatra macroeconomic.
Raha fintinina, ny fampahalalana kely misy ao amin'ny modely (fiheverana marina momba ny zava-misy) no tsy dia ilaina loatra.
Z. Bayer 08 - 05/2022/13 amin'ny 13:XNUMX
Ity no fanakianana malemy indrindra. Na dia tsy marina tanteraka aza, satria azo inoana fa iray ihany no ambony indrindra, ary amin'ny sehatra tsirairay dia manaporofo farafaharatsiny fa tsy voatery ny fampiakarana hetra no mampitombo ny fidiram-bola. Izany no tena hevitra.
Tena tsy ekeko koa fa tsy dia manampy loatra ny fanazavana kely. Eto koa dia misy dingana sarotra kokoa izay manana optimum.
Z. Bayer 08 - 05/2022/13 amin'ny 29:XNUMX
Tsy mbola nodinihiko, fa teny iray no nanintona ny masoko. Nanoratra ianao fa raha ny hevitrao rehefa tsy misy fampahalalana momba ny fizotran'ny fizarana dia tsy azo atao mihitsy ny miresaka momba ny antonony. Raha niresaka momba ny zavatra nolazainao tamin'ny farany momba ny fifanandrinana amin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny Gd sy ny famoronana, momba ny fanaporofoana ny maha-tokana ny rafitra ara-dalàna dia nihevitra aho fa nilaza ianao fa ny maha-tokana dia azo angatahina tsy misy fampahalalana momba ny fizotran'ny fizarana. Inona no mahasamihafa azy?
Z. Bayer 08 - 05/2022/14 amin'ny 44:XNUMX
Rehefa tsy fantatry ny tenantsika mihitsy ny fizotrany fa misy ny dingana atao any dia tsy misy dikany ny fiheverana fa fanamiana ny fizarana. Araka ny nanehoako hevitra dia io no default indrindra fa tsy hatsanganako betsaka. Fa amin'ny fomba fijery ara-teôlôjia dia misy ny fiheverana fa ny fananganana izao tontolo izao dia tranga feno avy amin'ny tsinontsinona tanteraka (raha tsy izany dia hijanona ny fanontaniana hoe inona no namorona ny teo aloha). Amin'ny toe-javatra toy izany, ny fiheverana fa ny fizarana fanamiana no mitombina sy mitombina indrindra. Mila antony ny fitsinjarana tsy mitovy. Ao amin'ny loteria ny fanahy, na Andriamanitra no manao izany na fomba hafa, dia misy antony, ary tsy maintsy mahafantatra izany antony izany mba hilaza zavatra momba izany.
Z. Bayer 08 - 05/2022/14 amin'ny 56:XNUMX
Sarotra aho fa hitsapatsapa kely kokoa. Sarotra amiko ny mahita ny fanavahana ny fitsinjarana fanamiana sy ny fitsinjarana tsy mitovy, fa avelao aho (satria hevitra tokony hosaintsainina) ary manontany raha tsy izany - toa fitsinjaram-pahefana mitovy (mety amin'ny fiheverana symmetrika) dia miavaka kokoa noho ny fizarana tsy fanamiana sasany.
Ankoatra izany, ary manantena aho fa tsy diso aho ary manakorontana, toa amin'ny resaka ankamaroan'ny fandrarana fa misy ihany koa ny mekanika ho an'ny hardware.
H. Bayer 08 - 05/2022/16 amin'ny 53:XNUMX
marina. Noho izany, ny fizarana fanamiana dia raisina raha tsy misy fampahalalana hafa. Io no tsotra indrindra sy symmetrika indrindra.
Mikasika ny halakhah ao amin'ny fandrarana, ny tranga tsirairay dia amin'ny fahamendrehany. Saingy misy ny mandeha tsy aorian'ny fandinihana statistika ihany fa aorian'ny lalàna-halakhic (ohatra, miezaka ny fahatsorana. Misy fitsipika meta-legal izay misy fiantraikany, sns.).
H. Bayer 08 - 05/2022/18 amin'ny 53:XNUMX
Raha izy no tsotra indrindra sy symmetrika indrindra, dia izy no miavaka indrindra amin'ny karazany, nefa? Fivelomana sns.
H. Bayer 08 - 05/2022/20 amin'ny 30:XNUMX
Tsy manao fizarana grill izahay. Ny fizarana no mifehy ny loteria. Ny fizarana fanamiana no tsotra indrindra ka heverina. Tahaka ny fanjairana teboka amin'ny tsipika mahitsy dia tsara kokoa noho ny fanjairana azy amin'ny sine, na dia azonao atao aza ny milaza fa ny tsipika mahitsy no tsotra indrindra ary noho izany no tena manokana.
H. Bayer 08 - 05/2022/21 amin'ny 40:XNUMX
Toa avy any amin'ny toerana izay nahatongavanao tamin'ny tsipika mahitsy fa satria hitanao fa misy tsipika tsotra sy manokana izay manjaitra eo amin'ny inona avy eo ka azo inoana fa tsy kisendrasendra izany. Saingy tsy azontsika atao ny mihevitra fa ny tranga iray dia hianjera amin'ny tsipika mahitsy tsy misy fiatoana. Azoko lazaina fa priori tanteraka ny fiheverana ny fahatsorana, fa ahoana no anehoan'ny andalana izany.
(Nieritreritra aho talohan'ny fanehoan-kevitra teo aloha momba ny loteria fizarana fa tsy azoko ary mbola manontany tena aho)
H. Bayer 09 - 05/2022/07 amin'ny 38:XNUMX
Tsy dia azoko loatra ny atao hoe resaka. Tsy manaiky ve ianao fa raha tsy misy fampahalalana hafa dia mety hisy fizarana fanamiana? Nahoana no misy fahasamihafana eo amin'ny vokatra? Raha tsy fantatry ny olona ny fahasamihafana misy eo amin'ny valin'ny santionany dia azo inoana fa mitovy lanja izy rehetra. Tsy hitako izay ho ampiana.
H. Bayer 09 - 05/2022/09 amin'ny 48:XNUMX
Saingy mihevitra ianao fa na dia tsy misy fampahalalana aza dia tsy azo inoana ny fizarana fanamiana amin'ny fanahy. Ary nohazavainao fa izany dia satria misy dingana tsy fantatra, ary amin'ny fisehoan'ny tsy vita ihany no tokony hipoitra amin'ny fizarana mitovy ny rafitry ny lalàna ary noho izany dia manana porofo momba ny famoronana ny maha-tokana ny rafitra.
Mbola tsy manana hevitra marim-pototra aho, ary angamba misy fahasamihafana eo amin'ny alohan'ny zava-mitranga (fa raha manao kajy ny zavatra andrasana dia mety hihevitra ny fizarana mitovy) sy aorian'ny nitrangan'izany (dia sarotra be ny mihevitra fa tokony ho izany. nitranga tamin'ny fizarana fanamiana). Ary MM amin'ny fombanao no nanontaniako ary raha reraka dia reraka.
H. Bayer 09 - 05/2022/12 amin'ny 32:XNUMX
marina. Ary nanazava ny fizarana aho. Ao anatin'ny dingana dia mitovy ny tranga fizarana. Ao amin'ny dingan'ny fifantenana dia tsy misy antony tokony hiheverana izany. Ary nampiako koa fa angamba izany no heveriko raha tsy misy vaovao, fa tsy hanangana na inona na inona amin'izany aho.
Toa reraka izahay.
H. Bayer 09 - 05/2022/12 amin'ny 54:XNUMX
Azonao atao ve ny manazava amiko fotsiny raha azoko tsara fa amin'ny porofon'ny tsinontsinona (mihevitra fa azo atao izany, mba hanaporofoana ny Petah Tikva tsy miankina amin'ny cosmology) dia milaza tsara ianao fa hisy ny fizarana fanamiana (ary izany no izy. fitakiana fanakianana ho an'ny porofo), fa tsy petra-kevitra momba ny tsy fahampian'ny fahalalana fotsiny.
H. Bayer 09 - 05/2022/13 amin'ny 38:XNUMX
Eny. Raha avy aiza izy io dia tokony horaisina ho fizarana fanamiana.
Ny mpanelanelana farany
Z. Bayer 08 - 05/2022/14 amin'ny 30:XNUMX
Raha ny fiheverana dia hoe tsy miavaka isika, dia tsy maninona na sambany na vao haingana izay mitranga amintsika, miaraka amin'ny mety ho 50% na mety ho 1 isaky ny trillion, araka ny fitsipika momba ny statistika na mifanohitra. ho azy ireo. Tsy miova mihitsy ireo rehetra ireo. Rehefa dinihina tokoa, isika dia tsy miavaka.
Ka tsy ilaina izany dinika rehetra izany.
Antoko Arabo ao amin'ny governemanta
Fanontaniana avy amin'i Amartzim
mahery On Ny fisondrotana sy ny fianjeran'i Bennett sy ny heviny (Tsanganana 486)
Maor Shrikki On Ny fisondrotana sy ny fianjeran'i Bennett sy ny heviny (Tsanganana 486)
mikyab On Ny fisondrotana sy ny fianjeran'i Bennett sy ny heviny (Tsanganana 486)
Tanana. On Ny fisondrotana sy ny fianjeran'i Bennett sy ny heviny (Tsanganana 486)
Samu Alcomisi On Reference amin'ny video iGod